Taageerayaasha Kratom ee New Jersey waa ku farxi doonaan in ay ogaadaan in ay taasi ka duwan oo geedo yaryar oo daawo waa sharci in ay gobolka. caleemo Kratom soo jeedaan geed Asian Mitragyna Speciosa iyo bixiyaan Manfaco badan in dadka isticmaala ay sida kor u qaadida gobolka deggan ee maskaxda iyo hagaajinaysa tamarta jidhka iyo maskaxda. Laakiin waxaa jira qaar ka mid ah bar dhiga geedka la heerarkii kale ee sharciga oo ku dadaalayaan in ay soo bandhigayso xeer adag ku soo iibiyey. Inkastoo Kratom uusan soo saarin muuq eg marijuana iyo maandooriyeyaasha kale, waxaa jira dad ka mid ah kuwo weli qabaa geedo yaryar oo waa in ay sharci-darro ah. For Laakiin hadda, New Jersey dooni inuu sii sharci doogga in ay gobolka, oo halkan sababta.
New Jersey aqbalaada faa'iidooyinka Kratom
Taariikhda New Jersey ee sida wajiyo Maraykan ah, dabiciga dabiiciga ah, iyo maqaamkeeda ah goob aad ugu qanacsan tahay hadiyado dabiiciga ah ee ka dhigaysa gobol this musharax tahay inay taageeri doonaan siyaasadda horusocod. Iyadoo tan maskaxda, waa inay noqdaan layaabna ma leh in New Jersey arka dhibaato ah kuma qabo isticmaalaya Kratom inkastoo isku dayga ay dalalka sida Indiana iyo Tennessee koox waxaa la marna sharci sida cusbada qubeyska iyo waxyaabaha kale ee. Doogga waxaa loo arkaa amaan ah oo aad loo jecel yahay in dukaamada New Jersey maxalliga ah. Waayo, hadda, New Jersey fariisan karo raaxo og ma jiraan xayiraad ah oo ku saabsan sida ay u bartaan oo ay isticmaalaan kratom.
Sida loo soo iibsado Kratom ee New Jersey
The quickest and easiest way to purchase high quality kratom is to shop online. Waxba ma ahan wixii waqti ee sanadka ay tahay - ama habka dabaylo siyaasadeed waa la is qarxiyaan - aad had iyo jeer ka heli kartaa xulashada lagu kalsoonaan karo oo la awoodi karo ee daawo ka qaybino aaminsan online-ka aad doorato. Iibiya cusub oo badan ayaa waxa ay dageen, gaar ahaan sida Kratom ayaa heshay aqbalo dheeraad ah ee magaalooyinka deegaanka magaalomadaxda weyn sida Newark, Jersey City iyo meelo kale.
U hubso in aad doorato mid ka mid ah in uu leeyahay taageere u eegid weyn, maraakiibta degdeg ah ka Maraykanka ah ee, oo damaanad lacag dib a. Arena Ethnobotanicals is a great place to start learning about the different products available and to try them out when you’re ready.
Marka ay timaado xuquuqda madaniga, aad heshay in ay sii joogaan heegan u wax u socdaan iyo ogaadaan sida ay u dhaqmaan, marka waxaa la gaaray waqtigii ay u hadlaan. You shouldn’t take for granted the legality of Kratom right now because it’s only possible thanks to overwhelming public opinion and widespread use. Haddii aad rabto inaad sii Kratom heli karaa New Jersey, aad doonayso in aad in dadka ay ogaadaan sida faa'iidada doogga siinayaa mudnaan in sababta ay u baahan tahay in ay sii sharci. Waxaa Samee dhibic si ay aragnimo fiican aad la saraakiisha dawladda hoose wadaagaan marka la arko in ay sidaa u sameeyaan. Sidaas, waxaan dhamaan yeelan karaan codkayagii maqlay in lagu hayo dalkeena bulsho la xoreeyay.